Qaybtii 5aad:"Paltalk waa Mucjiso!"‏ (Sheeko Xiiso Leh)
Friday November 07, 2008 - 11:22:39 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Waa kasta waa sii baryaaa, gabar lama haayo, qof xataa aragtay weli lama arag. Booliskii waxeey iskugu waceen dadkii yaqaanay, oo qofwalba wareeysi lana sameeyay, lana suaalay waxyaabo badan, ardaydii, macalimiintii iyo dadkii kale oo ay isyaqaaneenb
Wiilkuna waxuu ku soo arkay shaleemada ayadoo la joogto nin dheer, xoogan, midibkiisuna madow yahay, oo ay filinkii kadib is raaceen. Waxaa la raadshay ninka uu wiilku tilmaamay, weeysa adagtahay sida lagu helo, maadaama kumanaan nin oo leh tilmaantaas ay joogaan magaaladaan.
Yaa diidan? Maxaa sabab u ah is afgaran waayaan? Maxaa looga fekerin runta? Soo xabsiga lama wada geli doono? Ma dhabaa in ay waalantahay Maariya ama waalatay wixii ku dhacay kadib? Waa suaalo taagan, oo aan jawaabtooda la heli doonin ilaa waqtiga laga gaaro. Danbiile waa danbiile, Illaah hadii uu garabkiisa ka baxane qodkoo qoday ayuu ku dhaci doonaa gargaar la'aan!! Soomaali horay ayeey u tiri: ”Gud sireed ha qudin hadii aad qudinna ha dheereeynin ku dhici doontidaa ma ogide!”
Qaybtii 3aad "Paltalk waa Mucjiso!"‏ (Sheeko Xiiso Leh)
Qaybtii 4aad "Paltalk waa Mucjiso!"‏ (Sheeko Xiiso Leh)